Van Gaal Oo Milan Ku Jeeda, De Bruyne Oo Soo Dhaweeyay Ibra, Torres Oo Sii Joogaya Madrid. | Haqabtire News
Van Gaal Oo Milan Ku Jeeda, De Bruyne Oo Soo Dhaweeyay Ibra, Torres Oo Sii Joogaya Madrid.
June 21, 2016 - Written by Sports Staff
10 maalmood oo qura ayaa ka hartay in suuqa kala iibsiga uu si rasmi ah uga wada furmo qaarada Yurub iyadoo kooxaha qaarkood ay durbaba soo iibsadeen ciyaartoy halka kuwa kale lala xiriirinayo ciyaartoy ay ku adkeeyeen kooxahooda. Kooxaha qaar tababare ayay suuqa ugu jiraan, hadaba caawa waxaan idiin soo uruurinay warar kookooban oo ku saabsan suuqa kala iibsiga.
VAN GAAL OO AC MILAN KU JEEDA?
Tababare Louis van Gaal ayaa lala xiriiriyay shaqada tababarenimo ee AC Milan sida ay sheegayaan warar Italy ka soo baxaya.
Van Gaal ayaa laga ceyriyay shaqada Manchester United mar sii horeysay xagaagan ka dib labo sanno uu hogaaminayay Old Trafford, waxaana uu booska u baneeyay Jose Mourinho.
Wargeyska Talyaaniga ee Gazzetta dello Sport ayaa ku waramaya in ninka reer Holland uu ku jiro liiska macalimiinta loo qorsheeyay inuu bedelaan tababare Sinisa Mihajlovic. Andre Villas-Boas iyo Ronald de Boer ayaa sidoo kala lala xiriiriyay shaqada Rossoneri.
DE BRUYNE OO SOO DHAWEEYAY IBRAHIMOVIC
Xiddiga Manchester City Kevin de Bruyne ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in Zlatan Ibrahimobic uu ku fiican yahay Premier League.
De Bruyne ayaa u sheegay Sky Sports News inay tahay wax u fiican 34 jirkaan reer Sweden inuu ku biiro kooxda ay xafiiltamaan ee Manchester United.
“Waxaan qabaa inay u fiicnaan doonto isaga sida iska cad” ayuu yiri. “Waxa uu ku soo noolaa dhowr magaalo, sidaasi darteed wuu iska taxadiri doonaa.
“Waa xiddig weyn oo ku soo saa’iday horyaalka, waxaana ay u fiican tahay horyaalka.”
BLANC OO KA TAGAYA PSG
Laurent Blanc ayaa isbuucaan isaga tagi doona PSG, idaacada Faransiiska ee Europe 1 ayaa sheegtay maanta iyagoo soo xiganaya wakiilka tababaraha.
“Inta u dhaxeysa haatan ilaa iyo dhamaadka isbuuca PSG iyo Laurent Blanc waa ay kala tagi doonaan” ayuu Jean-Pierre Bernes yiri.
Macalinka reer Spain Unai Emery oo Sevilla ku hogaamiyay seddex koob oo Europa League ah ayaa si weyn loo warinayaa inuu qaban doono shaqada PSG.
BESIKTAS OO RABTA OSPINA
Kooxda Besiktas ayaa lagu waramayaa inay xiiseyneyso goolhayaha kooxda Arsenal David Ospina sida ay qortay Daily Mirror.
Kooxda Turkiga ayaa la sheegayaa inay ku jahwareersan tahay 3da milyan ginni ee la duldhigay 27 jirkaan kaasoo kursiga keydka Emirates Stadium u fadhiya Petr Cech.
Waxa uu afar kulan oo horyaalka Premier League ah u ciyaaray kooxda Arsene Wenger.
TORRES OO SII JOOGAYA MADRID
Fernando Torres ayaa ogolaaday inuu hal sanno kale sii joogo Atletico Madrid sida ay shaacisay Radio Marca.
Torres ayaa ku soo laabtay kooxdiisa hore isagoo heshiis amaah ah oo 18 bilood ah uga soo tagay AC Milan bishii Janaayo 2015.
Xiddiga reer Spain ayaa qandaraaskiisa Milan waxa uu dhacayaa 30ka bisha Juun, waxaana haatan uu xilli ciyaareed kale sii joogayaa Atletico Madrid, iyadoo Radio Marca ay ku warameyso in wadahalada labada dhinac ay soo dhamaadeen.